निर्वाचनका कारण बाघ गणना रोकियो
काठमाडौँ, कात्तिक १९ गते । नेपाल र भारतमा एकै समयमा पाटे बाघ गणना गर्ने भनिए पनि चुनावका कारण नेपालमा गणना नहुने भएको छ । नोभेम्बर महिनाको सुरुबाट दुवै देशका संरक्षित क्षेत्रमा एकैसाथ गणना गर्ने भनिए पनि तराई क्षेत्रमा दोस्रो चरणको चुनाव आगामी मङ्सिर २१ गते हुने भएकाले नेपालतर्फको बाघ गणना कार्य निर्वाचनपछि हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रका कर्मचारी चुनावका बेला खटिनुपर्ने भएकाले नोभेम्बर महिनामा बाघ गणना कार्य सुरु गर्न नसकिएको हो । बाघ गणनामा दक्ष प्राविधिक सरकारी कर्मचारी र तालिम प्राप्त व्यक्ति परिचालन गरिन्छ । नेपालमा शुक्लाफाँटा, बर्दिया, बाँके, चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ पाइन्छन् ।
महानिर्देशक खड्काले भन्नुभयो, “नेपालका संरक्षित क्षेत्र जोडिएका भारतका संरक्षण क्षेत्रमा एकैसाथ गणना गर्ने दुई देशका अधिकारीबीच सहमति भएको थियो । एउटै बाघ नेपाल र भारतका वनजङ्गलमा विचरण गर्ने भएकाले फरक फरक समयमा गणना गर्दा दुवै देशमा रहेका बाघको सङ्ख्या यकिन गर्न कठिन पर्ने हुँदा एकै समय पारेर गणना गर्न खोजिएको थियो । ”
उहाँका अनुसार नोभेम्बर महिनामा नेपालमा गणना गर्ने कार्य सुरु हुन नसकेपछि भारतका संरक्षित क्षेत्रमा नेपालतर्फको भूभागबाहेक अन्य स्थानमा क्यामरा ट्रयापिङ विधि प्रयोग गरेर गणना कार्य सुरु गरिएको छ ।
विभागका पर्यावरणविद् लक्ष्मण पौडेलका अनुसार नेपालतर्फ पनि गणनाका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले एक हजार एक सय क्यामरा तयार गरिसकेका छौँ । विभागका कर्मचारीबाहेक अन्य सयौँ प्राविधिक व्यक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले प्राविधिक व्यक्तिको छनोट गर्ने कार्य पनि भइसकेको छ । अब कुन समयमा सुरु गर्ने भन्ने विषयमा मात्र टुङ्गोमा पुग्न सकिएको छैन । ”
विभागका अनुसार कम्तीमा दुई महिना लगाएर बाघ गणना गरिनेछ । गणनामा सबैभन्दा बढी जनशक्ति चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिचालन गरिने भएको छ । चितवनमा चार हजार व्यक्ति, बर्दियामा तीन हजार व्यक्ति, बाँकेमा एक हजार दुई सय व्यक्ति, शुक्लाफाँटामा एक हजार दुई सय व्यक्ति र पर्सामा पनि एक हजार दुई सय व्यक्ति परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । क्यामरा ट्रयापिङ विधि बाघ गणनाका लागि विश्वभरि नै भरपर्दाे प्रविधि मानिन्छ ।
सन् २०१३ को बाघको गणनामा चितवनमा १२०, बर्दियामा ५०, शुक्लाफाँटामा १७, पर्सामा सात र बाँकेमा चार गरी कुल १९८ पाटे बाघ रेकर्ड गरिएका थिए । पछिल्लो समयमा संरक्षणका प्रयास निकै प्रभावकारी भएकाले यस पटकको गणनामा कम्तीमा ५० वटा बाघ थप रेकर्ड हुने अनुमान विभागले गरेको छ ।
विभागलाई गणनाका लागि जुओलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन (जेडएसएल), विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष लगायत संस्थाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिरहेको विभागले जनाएको छ ।
जेडएसएलका बाघ विशेषज्ञ डा. भगवान दाहालका अनुसार क्यामरा ट्रयापिङका लागि संसारभर अन्यन्तै भरपर्दाे मानिएको करिब दुई करोड रुपियाँ मूल्य बराबरका अमेरिकन प्यान्थेरा क्यामरा, अन्य व्यवस्थापनका लागि चार करोड रुपियाँ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमार्फत विभागलाई उपलब्ध गराइएको छ ।
कोषले बाघ गणनाका लागि स्थानीय तहमा प्राविधिक व्यक्तिको परिचालन र अन्य व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । कोषका सदस्य सचिव डा. गोविन्द गजुरेलका अनुसार बाघ गणनाका लागि फिल्डस्तरमा सबै किसिमका तयारी पूरा भइसकेकोले अब गणनाको मिति घोषणा हुनेबित्तिकै प्राविधिक टोली परिचालन गर्न सकिनेछ ।
सन् २०१० मा मस्कोको बाघ सम्मेलनको घोषणापत्रमार्फत बाघ पाइने देशले आगामी सन् २०२० मा आफ्नो राष्ट्रमा भएका बाघलाई दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सो प्रतिबद्धताअनुसार आगामी सन् २०२० मा नेपालले बाघको सङ्ख्या २५० बनाउने सक्ने निश्चित देखिएको छ । सन् २०१० मा नेपालका बाघको सङ्ख्या १२१ रहेको थियो । यो प्रतिबद्धता नेपालले पूरा गर्न सके बाघ संरक्षणमा विश्व समुदायको अनुदान रकम प्रशस्त मात्रमा भित्रिन सक्ने बाघ विज्ञहरूले बताएका छन् ।